Izindatshana Zomoya Eziholela Ekuhlolweni Kwokholo - u-Edwin Van Der Hoeven
Izindaba ze-Ghost eziholela kwisipiliyoni sokholo
isipiliyoni, ukholo, ukukholelwa kwenkolo, ukungazi, uqobo, umhlaba ongokomoya
~ Izwe likamoya linobuhlakani futhi liyazi ukuthi uzolithola kanjani futhi nini. Hhayi ukukukholisa, kepha kunalokho ukuvumela izinkolelo zintengantenge ukuze uvulekele isimangaliso sempilo. ~
Akukho lutho olukhethekile njengolwazi lomuntu siqu nomhlaba wokomoya. Ngokwazi kwami ​​ngiyazi ukuthi lezi zinhlobo zemicimbi zenzeka ngokuzenzakalelayo hhayi ukuthi lapho ziphuma. Imvamisa yilezi zehlakalo ezisenza sikholwe ngokuphila ngemuva kokufa, noma ukuthi kunokuthile phakathi kwezulu nomhlaba. Ngakho-ke ngiyibona njengesipiliyoni senkolo, hhayi inkolelo yenkolo! Abantu abaningi banokuhlangenwe nakho okuzenzakalelayo nabathandekayo abashonile, kodwa kaningi lemizamo yokuxhumana ayitholi impendulo. Kungenxa yangempela yemvelo ukuthi ngokuvamile ayinakuchazwa ukuthi iyaphikisana neenkolelo zomamukeli empilweni noma inkolelo.
Okuhlangenwe nakho kokholo kunikeza induduzo
Kuyadabukisa ukuthi okuhlangenwe nakho okuningi akwabiwe ngenxa yalokhu. Muva nje kuvele ku-facebook ukuthi okuthunyelwe kwami ​​kuthole ukusabela okuhle kakhulu okuvela kubantu abahlukahlukene embuzweni wokuthi ngabe bake bayibona yini 'indaba yesipoki'. Okuhlangenwe nakho okunjalo, noma behluke kangakanani, kufanele kugujwe njengophawu olukhethekile lwabathandekayo bethu. Lokhu akusho ukuthi zonke izimpaphe ezisemhlabathini ziwumyalezo, kepha yilokho okwenzekile ongeke ukwazi ukukuchaza. Njengendaba elandelayo eyabiwe:
“Ngiye ethuneni likamalume wami angazi ukuthi umngcwabo ungcwatshwe kuliphi ithuna. Bengicabanga ukuthi ngizohamba ngethemba lokuthola ithuna. Ngokungazelelwe kwaba khona unogwaja lapho, engabe sengiyilandela. Ngokushesha unogwaja wayesephelile futhi ngangicishe ngimi eduze kwethuna. ”
Isilinganiso nokuqiniseka asilandeli unogwaja, kungumuzwa nje, ithuba, amathuba wokuthi kunokunye okukhona phakathi kwezulu nomhlaba okuvumela ukuba i-bunny ikulandele. Ngale ndlela isipiliyoni sokholo senziwa ukuthi ungaqiniseka ukuthi ubheka impilo ehlukile. Ukuze uvuleke kakhudlwana kulezo zikhathi ezincane zemilingo ezingenakuphikwa, kepha zinikeza induduzo engaka.
Izici ezi-3 'zendaba yesipoki'
Yizinkolelo okufanele zibhekwe ngokusobala. Futhi 'ihlaya' ukuthi lezi zinhlobo zokuhlangenwe nakho okuzenzekelayo zihlaselwa masinyane abagxeki abakholwa ukuthi baqinisile. Inkolelo inkolelo! Noma yini ephambuka kancane kulokho kubhalwe njengombhedo nokungewona umqondo. Iphuzu ukuthi, aliphazamisi ulwazi. Futhi, akuzona zonke izimpaphe ezisemhlabathini eziyisiginali esivela phezulu. Uma ungena 'ezindabeni eziyizipoki' uvame ukubona izici ezintathu;
kwenzeka ngomzuzu ongalindelekile
Futhi ihlala inothando, yize okuhlangenwe nakho okuthile kungakwesabisa ngenxa yemvelo yayo engalindelekile.
Isipiliyoni esikhethekile asibufakazi obunzima
Ama-skeptics nososayensi, baneqiniso uma bethi ngeke kufakazelwe. Ngaleyo ndlela, okuhlangenwe nakho okungokomoya nesayensi kungenzeka kungatholakali nhlobo. Isayensi ifuna ukukhiqizwa kabusha, izwe lomoya elizenzakalelayo. Okuxakayo ukuthi okuhlangenwe nakho kokukholwa akunakuchazeka futhi akulindelekile ngoba akuyona inkohliso kodwa kuyisibonakaliso sothando. Kepha mhlawumbe okubaluleke kakhulu; kungomuntu siqu! Umuzwa wokuthi, ngokwesibonelo, othandekayo useseceleni kombhede wakho phakathi kobusuku ungowomuntu siqu, kuzoba umvimba kamufi ukuthi usosayensi uyakholelwa yini noma cha. Noma ukuzwa izwi, nakho lokhu kuxoshwa ngokushesha njengesimo sezokwelapha hhayi okuhlangenwe nakho okungokomoya. Noma kunjalo imvamisa umongo okwenzeka kuwo owunika inani; noma ubuhlakani obusemuva kwayo. Uma into enjalo yenzeka lapho uzoqiniseka ukuthi isilinganiso angeke siqonde konke futhi uvame ukuvulekela kakhulu kulokho okwenze ukuthi ukholelwe empilweni yokufa, ngokwesibonelo.
Umsizi ongokomoya uzethula
Akukwenzi mqondo ukuphinda isipiliyoni ngokuzenzakalela. Angisoze ngakukhohlwa 1 kokuhlangenwe nakho kwami ​​kokuqala lapho ngangivakashela umngane. Ungumuntu osezingeni eliphakeme futhi uthole izibonakaliso ezithile ukuthi ngubani ongaqondisi. Uyihlobanise nendawo eNgilandi, kepha kwaba igama lakhe lokugcina. Ungitshele ukuthi uzongena ethuneni, cela umhlahlandlela ukuthi asondele futhi kufanele nginikeze lo mhlahlandlela isivivinyo esihle; wayengubani futhi kanjani konke futhi ngani.
Ngangimusha impela esimweni 'somoya' sobuchwepheshe obuphakathi ngakho-ke ngangingazi nakancane ukuthi babesho ukuthini. Kepha uvale amehlo akhe ngeqiniso; ngesinye isikhathi ngabona kuqhamuka indoda. Ngavele ngabona lo muntu evule amehlo futhi kwaba sengathi uqhamuka ngemuva kwakhe. Ngokumangala okukhulu ngambuza engqondweni igama lakhe, unyaka wokuzalwa nezinye izinto ezimbalwa. Angazi ukuthi kungani ngangicabanga ukuthi lokhu kuzosebenza, kepha kwasebenza futhi waphendula kahle.
Sasinegama; UGeorge. Kungaba ubuwula, kepha ngenxa yobumfihlo angikwazi ukunika isibongo. Ngokushesha saseshe i-inthanethi sathayipha igama lakhe nesibongo sakhe kodwa asitholanga lutho. Khonokho nje ngezwa elinye ilizwi lingihlebela endlebeni; Okusezingeni eliphezulu. Kodwa angizange ngithembele ezindlebeni zami futhi ngakushiya njengoba kunjalo. Umzamo wehlulekile!
Umhlaba ongokomoya uyazi iGoogle
Noma cha…. ngakusasa emsebenzini belilokhu lihlupha ingqondo yami ngakho-ke ngavula isiphequluli ngafuna igama lakhe lokuqala nesibongo futhi kulokhu futhi igama elithi 'ngongqondongqondo', ngacofa izithombe zeGoogle ngazethusa futhi ngashaqeka ngokuphelele ngama-blubbers. Ngabheka ngqo ebusweni bendoda engangiyibone ngayizolo. Lesi sithombe siholele esihlahleni somndeni futhi indoda engcono kakhulu engiyibonile kwakungubaba womqondisi okukhulunywa ngaye. Lonke ulwazi lufane nalokhu angitshele kona izolo.
Ukube nje ubungarekhoda umcimbi onjalo ngokwesayensi. Cishe ayisoze yasebenza! Kepha kimi kwakungokuhlangenwe nakho engingasoze ngakukhohlwa futhi okuhlangenwe nakho okuningi okuhlukile kuye kwafika ngemuva kwalokho. Ngikholwa ngempela ukuthi uma sivulelekile kubo, izwe likamoya lizobazisa ukuthi bakhona. Lokho akuyona inkolelo kepha ukholo emandleni wesipiliyoni uqobo.
I-29 Mashi, 2019
Ukulamula kuyingxenye yokuba ngumuntu lapho kunakwa okuncane kakhulu okukhokhelwa
Abantu abaningi basakwesaba ukufa. Ukukhulumisana kusikhombisa ukuthi singabona umzimba wethu njengemoto yomphefumulo wethu. Ukuthi asiwona umzimba wethu, kodwa sinomzimba. Ukubonisana kuhlale kunokwenzeka, kepha kubaluleke kakhulu uma ngingakusiza ukuthi uxhumane nabathandekayo bakho.